Fambolena | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hambolena sy hampiroboroboana kôkômera "Avril"
Ny kongresy dia anisan'ireo legioma marevaka indrindra eran-tany. Ampiasain'izy ireo vao misotro orina. Maro ny karazan-javamaniry sy hybrida voapoizin'io zavamaniry io, ka mahatonga azy io ho mora ny mitombo cucumbers any amin'ny faritra maro. Androany dia hijery akaiky ny karazana kokera Aprily F1, ary ny fahafahana mitombo ity hybrid ity any an-trano.
Ny endriky ny teknolojia amin'ny famokarana mofomamy ao an-trano
Ny fiangonan'ny mpihantona (na ny lakroa) dia manambatra karazan-tsakafo maromaro, izay malaza amin'ny fambolena tsy miankina sy amin'ny toeram-piompiana lehibe. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fambolena menamenatra dia hazavaina amin'ny lanjany maivana: ao anatin'ny roa volana dia mahatratra lanja masiaka ny olona. Ny fitomboan'ny fihazakazahana sy ny fihazonana dia misy fahasamihafana amin'ny fambolena karazana lay.
Ahoana no hanombohanao omby ombilahy ho an'ny hena? Karazana sy fandaminana ny raharaha
Ny biby fiompy (omby) ao an-trano ho an'ny mpandray anjara dia orinasa mahasoa, satria azo atao ny manome vokatra ho an'ny fianakaviana, ary ny ambiny kosa hivarotra sy hahazoana tombony. Ireo mpamboly vao haingana dia mihevitra fa ny ombim-bolo ho an'ny hena toy ny orinasa dia zava-manahirana sy lafo. Saingy miaraka amin'ny fikambanana araka ny tokony ho izy sy ny fanarahana ny fepetra takiana amin'ny fikarakarana dia mitombo ny fandraharahana, mitondra vola.
Ny masombolin'ny omby betsaka indrindra ao amin'ny faritanin'i Rosia dia "Black Motley"
Nandritra ny fotoana ela, nisy ombivavy iray nantsoina hoe mpitsabo mpanampy tany Rosia, ary ny harenan'ny fianakaviana mpamboly dia voafetra ny isan'ny biby tsara tarehy. Be dia be no niova hatramin'izao, fa ny indostrian'ny omby ihany no tena mpamokatra biby fiompy. Ilaina indrindra ny manamarika ny zana-trondro mainty sy fotsy, nahazo zaridaina betsaka tao amin'ny faritry ny firenentsika, tany Okraina sy tany Moldavia.
Ny tena endriky ny nofinofin'ny tantsaha - ombidia jiosy
Ny zana-boromadim-pirenena any Jersey, izay malaza eran'izao tontolo izao, dia ny fampisehoana ny nofinofin'ny mpamboly iray amin'ny fambolena azo itokisana sy mahasoa. Ny tanjony dia toy izany fa mety ho iray amin'ireo karazam-borona tsara indrindra manerantany amin'ny tontolon'ny ronono ao anatin'izao tontolo izao na dia ao anatin'ny toe-draharaha mivaivay aza. Tantara fohy Ity tranga tranainy ity dia niseho tao amin'ny nosy Anglisy anglisy tao amin'ny Channel English, izay nanome azy anarana.
Iray amin'ireo karazan-omby malaza indrindra eto an-tany ny famokarana ny Holstein.
Golshtinsky (Holstein-Friesian) varimbazaha omby vavy - iray amin'ireo malaza sy malaza indrindra eran-tany. Nahazo ny fizarana lehibe indrindra tany Etazonia, Kanada, firenena sasany any Eoropa izy, saingy ankehitriny dia mihalehibe izy any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao. Ny tantaran'ny endriky ny zaridaina Holstein Ity zaridaina mahafinaritra ity dia manana tantara mahaliana.
An-kialofana omby voavakin'ny faritra avaratra - "Ayshirskaya"
Aishirskoy zana-borona voatokana ho an'ny fambolena any avaratra. Ireo biby ireo dia tsy mandefitra ny hafanana ary afaka manao izany raha tsy misy sakafo matanjaka be. Heverina ho matotra ara-nofo izy ireo amin'ny taona faharoa. Tantaram-pamokarana Sambany vao nivoaka tany Ecosse io karazana omby io. Noho izany, avy amin'ny trano fonenan'ny Air Scottish ny anarany.
Safidy tsara ho an'ny zana-pambolena manokana na fambolena "Simmental"
Ny fitovitovan'ny Pestrus rosiana avy amin'ny tantaram-bahoaka amin'ny tandroka iray avy amin'ny mpiompy mpamboly aostraliana iray na Belzika dia manazava amin'ny hoe ny razambe iray nalaza tany Rosia sy tany Eoropa dia nihinam-be tamin'ny alokaloka mahatsiravina avy any Alpes Alpes. Ny tantaran'ny niandohan'io voary io Ny marika hoe "Simmental breed" dia ny ombidia miaraka amin'ny karazana lova mifandraika amin'ny karazana lion-dronono Bernese Oberland.
Ny fanapahan-kevitra tsara ho an'ny toeram-pambolena sy fiompiana - Zana-borona mena
Raha ny famokarana vokatra avy amin'ny toeram-pambolena dia ny famokarana vokatra avy amin'ny vokatra, ny safidy ho an'ny fikojakojana sy fambolena ny ombidia mena dia ho vahaolana sy azo ampiharina. Fotoana ela, efa ho 200 taona ny traikefa momba ny fiompiana sy ny zootechnical asa miaraka amin'ny zana-trondro no manamafy izany. Ny tantaran'ilay zaridaina mena. Ny toerana nahaterahan'ny zary dia atsimon'i Okraina.
Burenki "Yaroslavl" zary - iray amin'ireo solontenan'ny lamaody
Ny omby ao amin'ny zaridaina Yaroslavl dia manavaka ny loko mainty. Ny rononiny dia manana tavy matavy be, kaloria avo. Ao amin'ny famokarana indostrialy, vokatra haingam-pamokarana avo lenta no vita avy amin'ny ronon-tsoan'ny zana-boromailala Yaroslavl: tsaramaso tranokely, mena, tsaramaso ... Ny tantaran-tsokoloin'i Yaroslavl ireo omby dia nentina tamin'ny taonjato XIX.
Avy any Angletera ny ombidia masiaka sy tsy misaina - "Hereford"
Ny hena homemade dia efa mendrika mihoatra noho ny vokatra novidina, indrindra noho ny kalitao avo lenta sy ny tombontsoa omena ho an'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny tantsaha izay manamboatra ny orinasany manokana amin'ny famokarana ny henan'omby dia aleony mamolavola ny karazana biby fiompy, izay manana adihevitra avo lenta amin'ny sehatra isan-karazany sy ny vokatra tsara.
Ny Kholmogorks (ny omby "Kholmogorskaya") dia mitondra fifaliana ho an'ireo mitombo azy ireo ary ireo izay tia ronono fotsiny!
Amin'ny teny hoe "ombivavy", maro amintsika no maminavina ny hatsaran-tarehy mainty sy fotsy miaraka amin'ny tsiranoka marevaka. Tahaka izany ny havoan-tendrombohitra - solontenan'ny zana-trondro, iray amin'ireo telo malaza indrindra any Rosia. Ny ombivavy Kholmogory dia mifanaraka tsara amin'ny toetr'andro mangatsiaka, ary ny rononony dia manana tavy matavy sy tasty tsara.
Ny voankazo goavam-be no mamokatra avy any Soisa - Zaanenskaya
Ny zana-kala Zaanensky avy amin'ny ankavanana dia mandray ny toerana voalohany eo amin'ny zana-pamoloana amin'ny vokatra avo sy ny vokatra tsara. Ny toerana nahaterahana io karazana io dia toerana kely antsoina hoe Zaanen, any amin'ny alan'i Bernese any Soisa. Ity zana-trondro ity dia naseho tao amin'ny World Exhibition Paris tamin'ny taona 1856. Teo amin'ny taona 1905, nisy osy zaanensky dia nentina tany Rosia.
Firy taona no iainan'ny bryziera?
Ny fotoana sy ny faharetan'ny fiainan'ny bitro dia miankina amin'ny toetry ny biby sy ny karazan-tsakafo. Saingy ireo fotodrafitrasa ireo dia tsy misy afa-manoatra. Samy manana ny isany ny isam-borona tsirairay. Ny fiantraikan'ny biby eo amin'ny androm-piainan'ny bitro Mikasika ny natiora, ny bitro dia miaina ambany kokoa noho ireo mpanaraka azy.
Ny votoatiny sy ny fikarakarana ny akoho mamony eo amin'ilay tetika sy any an-trano
Ny akoho hena hybrid - mpihinam-bary - dia samy hafa amin'ny vorona tanora mahazatra miaraka amin'ny fampitomboana ny angovo fampandrosoana ary ny vidin'ny sakafo entina amin'ny 1 kg. Ny fambolena tantely hohanina ao amin'ny zaridaina dia asa mahomby. Novonoina hohanina izy ireo rehefa notanana nandritra ny 2.5 volana. Amin'ny fikarakarana sahaza, ny lanjan'ny akoho amin'izao fotoana izao dia 1,4-1,6 kg.
Ny fanaovana tranom-borona ho an'ny papelika dia-it-yourself
Ny sombin-tsolika dia tena manan-danja tokoa, ary mihatra amin'ny henan'ireny vorona kely sy ny atodiny mena ireny. Mipoitra izany fa mora ny mampitombo azy ireo any an-trano, saingy aloha dia mila tranokely isika, izay hotandremantsika. Ny tranombakoka ho an'ny papelika dia azo atao anaty tranokely, vita amin'ny plywood ary na plastika aza, mba hahafahana misafidy tsara ny safidin'ny trano fonenana ho an'ny papelika, indrindra amin'ny toetra mampiavaka ny vorona madinika.
Ny votoatiny, ny sakafom-bovoka sy ny zozoro ao an-trano
Nahoana no lasa be mpitia foana ny papelika fanosorana isan-taona? Satria noho ny vidin'ny atodin'ny papelika sy ny fisian'ireo olon-dehibe, dia ity no iray amin'ireo faritra tena mahasoa indrindra amin'ny fambolena an-tsaha ao an-trano na amin'ny fanatanjahantena. Hiresaka momba ny fomba hividianana, hivoatra ary ny hihazonana ireo solontenan'ireo rahalahy volo ao amin'ny lahatsoratrantsika.
Rudbeckia dia voninkazo maitso sy mamiratra ho an'ny zaridaina rehetra.
Fomba hafa lehibe amin'ny trano fambolena sarobidy: mini-greenhouse
Pelargonium: fikarakarana, fiompiana, fanongotra
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fambolena